Amajji tokko(Guyyaan WBO) seenaa qabsoo Uumata Oromoo ABO'n gaggeefamu keessatti bakka guddaa kan qabuu fi bara baraan golee Oromiyaa fi Oromoota biyya ambaa adda addaa keessa faca'anii jiraatanii ni kabajama. Kabajni Guyyaa WBO mirgaa fi Oromummaa WBO nu gonfachiisaan yaadachaa fi falama abbaa biyyummaa Oromoof jabaannee qabsaa'uuf guyyaa waadaa keenyaa itti haaromsinu dha.
Nuti miseensonni ABO konyaa Stavanger, biyya Norway Guyyaa WBO hawaasa Oromoo naannoo Stavanger waliin kabajannee jira.Guyyaa kabaja kan irraati itti gaafatamaa ABO kutaa Iskandenaaviyaa J/Mohaammed Ahamed ibsa fi maaliif Oromoo Amajjii tokko bara baraa akka kabaju ibsa bal'aa kennaanii jiru.Nuti miseensonni ABO konyaa Stavanger Guyyaa WBO ilaalchisee ibsa ejjennoo armaan gadii baafannee jirra:
WBO waan barbaachisuun hundaan utubuu fi bira dhaabachuuf waadaa gallee jira.
Waamicha gumaata Qabsoo Bilisummaa Oromoof; Xalayaa W/HD-GS-ABO irraa lakk: 149/xal-abo/2008 guyyaa 28/12/08 barreefamee fi Project Million tokko burqisiisuuf xalayaa Birkii Jaarma fi Siyaasaa Biyya Alaa lakk:0031/BSJBAJ/123108 guyyaa 31/12/08 nuuf barreefame irratti hunda'uun diqama nuuf kenname baatii sadii keesatti ba'uuf waada gallee jira.
Miseensonno ABO bakka jirutti ofirratti amanummaa keenya haaromfachuu, damaqinsa siyaasaa qabaachuu irraatti jaabaannee akka hojjennu ni dhaamanna.
Miseensoni ABO naamusaa fi sansaka gaarii qabaachuu fi kabaja Dhaabaa fi Jaarmiyaa keenyaa cimsee tikfachuu qabna.
Miseensoni ABO hir'ina fi dadhabina jaarmiyaa fi Dhaaba keenyaa faarsuu qofa osoo hin taane xiyyeefannaa gara diina keenyaati taasisuu fi jaabinaan gara hojii Dhaabaa irratti akka bobbaanu miseensota ABO hundaaf dhaamanna.
Dhuma irrati barri haaraan kan gammachuu fi injifannoo akka nuuf ta'u miseenota ABO fi Uumata Oromuu hundaa hawwina.
Gadaan Gadaa Bilisummaa ti.
Konyaa ABO Stavanger